Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Indawo yeendwendwe » Iindlela ezi-6 eziLula zokuHlala ukhuselekile kwi-Intanethi-UnMask ngoNov
I-intanethi sisixhobo esimangalisayo esitshintshe indlela esenza ngayo ishishini, ukunxibelelana nabahlobo kunye nosapho, ukufumana ulwazi kuzo zonke iintlobo zezihloko, ngaloo ndlela, ibe yinxalenye ebalulekileyo yobomi bethu bemihla ngemihla. Ngokoqikelelo, ngoku kukho abantu abangaphezu kweebhiliyoni ezimbini abasebenzisa i-intanethi kwihlabathi jikelele, kwaye phantse isiqingatha sabemi kumazwe aphuhlileyo anjenge-Australia, iCanada, neNew Zealand sele bekwi-intanethi. Baninzi abantu!
Nangona kunjalo, esinye isiphumo soku kukuba kunokuba nzima ukuzikhusela xa uku-intanethi. Kweli nqaku, siza kuhamba ngaphezulu kweendlela ezintandathu ezilula zokuba abantu bahlale bekhuselekile ngelixa besebenzisa umnatha!
Sebenzisa iVPN xa ukwi-Intanethi
I-VPN ikuvumela ukuba ubethelele ukugcwala kwakho kwi-intanethi kwaye uhlale ungaziwa ngelixa ujonga iwebhu. Inethiwekhi yabucala enenyani yitonela ekhuselekileyo phakathi kweendawo ezimbini ezahlukeneyo kwi-intanethi, evumela abasebenzisi ukuba bavule umxholo we-geo-restricted ngokubonakala ngathi bakwelinye ilizwe. Ngokusebenzisa inkonzo ye-VPN, unokufihla ngokufanelekileyo indawo yakho kwaye ugcine umsebenzi wakho we-intanethi emehlweni abantu besithathu njenge-ISPs okanye abahlaseli. Xa uqhagamshelwe kuyo nayiphi na enye iseva yoluntu ngaphandle kokhuseleko loguqulelo oluntsonkothileyo, nangona kunjalo, yonke into umhlaseli aya kukwazi ukuyibona yimiyalezo efihliweyo ethunyelwa ngapha nangapha phakathi kwakho kunye newebhusayithi ozama ukufikelela kuyo ngeeseva ezibambayo ezibekwe macala onke. ihlabathi—hayi ezo webhusayithi eneneni! Ke, ngolu hlobo lwendlela yokhuseleko, unokuqiniseka ukuba ulwazi lwakho lwabucala luya kuhlala lukhuselwe.
Sebenzisa uQinisekiso olunamanyathelo amabini
Umzekelo, ukuba uneakhawunti ye-Gmail kunye neakhawunti ye-Facebook edityaniswe kwaloo dilesi ye-imeyile, xa ungena kwiphepha leAkhawunti kaGoogle, uya kuba lukhetho lokungena ngokucofa nje kube kanye kwifowuni yakho kuzo zombini iinkonzo. Nangona kunjalo, ngokungafaniyo nokubuyisela igama lokugqitha, esebenzisa kuphela imibuzo elula yokuqinisekisa, ukuqinisekiswa kwamanyathelo amabini kufuna ukuba ufake inombolo yakho yefowuni. Ke, xa ungena kule nkonzo ithile ngokucofa nje kube kanye, iwebhusayithi iya kuthumela ikhowudi ngeSMS ngqo kwiselfowuni yakho. Nje ukuba ufumane lo myalezo ngempumelelo kwaye uwuchwetheze kwifomu yawo Iphepha leakhawunti kaGoogle, ungangena ngaphandle kweengxaki.
Lo ngumzekelo kuphela wendlela uqinisekiso lwamanyathelo amabini isebenza kwiiakhawunti zemidiya yoluntu ukususela ekubeni iqonga ngalinye le-intanethi lineendlela ezahlukeneyo zokusebenzisa lo mlinganiselo wokhuseleko olongezelelweyo; nangona kunjalo, bonke balandela ingcamango efanayo njengoko ichazwe ngasentla apho kukho zombini iindlela zokhuseleko ezilula kunye neziphambili ezidibeneyo ezinceda ukugcina ulwazi lobuqu lukhuselwe kuma-cybercriminals asebenzisa i-malware okanye abe amagama ayimfihlo ngokusebenzisa iinzame zokukhohlisa.
Hlala ucacile kwiiWebhusayithi eziSolisayo
Iiwebhusayithi ezikrokrisayo kufuneka ziphetshwe kuba ziqulethe umxholo onobungozi okanye i-malware enokwenzakalisa ikhompuyutha yakho ukuba undwendwela ezi sayithi. Imizekelo yeewebhusayithi ezikrokrisayo ziquka iivenkile ezikwi-intanethi ezinamaxabiso “alunge kakhulu ukuba yinyani” kunye neentengiso zeemveliso ezifana nezisombululo zokuncipha kobunzima ezithembisa iziphumo ezimangalisayo ngaphandle komthambo okanye ukutya okufunekayo. Amaxesha amaninzi, ekuphela kwendlela yokubona ukuba iwebhusayithi ikhuselekile kukujonga i-URL yayo; nantoni na eyenye inokubeka isazisi sakho emngciphekweni kwaye yosulele ikhomputer yakho ngesoftware enobungozi (isoftwe). Amaphepha ewebhu akrokrelekayo anokuthi akhuphele abasebenzisi kude kwindawo abajolise kuyo ngokusebenzisa iintengiso eziqulathe uqhakamshelwano olukhokelela kumaphepha angakhuselekanga, ngoko ke kubalulekile ukujonga ibha yedilesi phambi kokuba ucofe kuzo naziphi na iintengiso.
Ukuze ukhusele isazisi sakho kwaye ugcine ukhuseleko lwekhompyuter yakho, kungcono ukuba ungandwendweli iiwebhusayithi ezinokukubeka emngciphekweni we-malware okanye ezinye izinto ezikrokrisayo. Ekuphela kwendlela yokuqinisekisa ukhuseleko kwi-intanethi kukujonga i-URL yewebhusayithi (okanye idilesi yewebhu); kungenjalo, abasebenzisi banokuthunyelwa kude kwindawo abajolise kuyo ngeentengiso eziqulathe amakhonkco akhokelela kumaphepha angakhuselekanga. Kukwayinto entle ukuba ungacofa kwiintengiso kuba ezi zinokukhokelela abasebenzisi ngokuthe ngqo kwiiwebhusayithi ezinobungozi ezinokosulela isixhobo sakho ngesoftware enobungozi efana neentsholongwane kunye nespyware.
Yilumkele into oyithumela kwi-Intanethi
Qiniseka ukuba uyayazi into oyithumelayo kwi-intanethi. Oku kunokuba yingozi kuba akunakucinywa okanye kubuyiswe emva kokuba into ifikelele kwi-intanethi. Iya kuhlala ngonaphakade apho kwi-intanethi ukuze nabani na ayibone nangaliphi na ixesha kwixesha elizayo. Ke, ngaphambi kokuba wenze iposti malunga nayo nantoni na enokuchaphazela ubumfihlo bomnye umntu okanye ukhuseleko, cinga ukuba oku kunokumchaphazela njani ixesha elide ukuba babone ukuthumela kwakho endleleni kwaye bacaphuke ngawe kwiminyaka kamva. Awunakwazi ukuba ngubani onokufunda into oyibhalileyo!
Sonke sinesibophelelo sokugcinana sikhuselekile, ngoko ke kufuneka sihlale sinoxanduva xa sisebenzisa amaqonga onxibelelwano afana noFacebook, Twitter, njalo njalo…
Cinga kabini phambi kokusebenzisa iWi-Fi kawonke-wonke
I-Wi-Fi yoluntu iyingozi kakhulu kwaye ibeka imingcipheko emininzi yokhuseleko. Xa uqhagamshela kwinethiwekhi yoluntu, idatha yakho inokuvezwa ngeendlela ezininzi ezahlukeneyo.
Umzekelo, xa usebenzisa uqhagamshelo olungenazingcingo olungakhuselekanga, ubeka umngcipheko wokuba umntu alandele uhlobo lwewebhusayithi ozindwendwelayo, ezinokuthi zibeke ubumfihlo bakho emngciphekweni okanye zibenze babambe ulwazi olunovakalelo olufana neenombolo zekhadi letyala ezisenokungaguqulelwa ngokuntsonkothileyo. Uthungelwano lukawonke-wonke lusesichengeni sohlaselo lwabaduni abanokuthi baqweqwedise ii-akhawunti zabasebenzisi abamsulwa okanye basasaze i-malware ngokujikeleza ngezixhobo zokuxhaphaza isikhangeli. Ukongeza, ukuba akukho gama liyimfihlo kwi-Wi-Fi hotspot ekwabelwana ngayo, abantu abayi kukwazi nokuba baqhagamshela kwinethiwekhi echanekileyo. Oku kuthetha ukuba banokuphela besabelana ngolwazi olubuthathaka nomntu onokuthi emva koko abone loo datha, nto leyo engalunganga kwabo bakunxibelelwano loluntu njengakwisikhululo seenqwelomoya, ivenkile yekofu, okanye ihotele.
Qhuba uJonga imvelaphi kwisiqu sakho
Ukujongwa kwemvelaphi lushwankathelo lolwazi oluqokelelwe kwiirekhodi zoluntu. Ezi ngxelo ziquka imbali yolwaphulo-mthetho, uqhagamshelwano, kunye namalungu osapho, kunye nezinye iinkcukacha ezinokuchaphazela ukhuseleko lobomi bakho. Ukubaleka a jonga imvelaphi kuwe inokuba yindlela eluncedo kakhulu yokuqokelela ulwazi malunga nedijithali kwaye uqiniseke ukuba akukho mibuzo ingaphendulwanga, iziphelo ezingacacanga, okanye ukuchonga naluphi na ulwazi lwabucala olunokubakho olungafunwayo kwi-intanethi.
Xa ujonga imvelaphi yakho, kubalulekile ukuba ubuyele umva ngexesha kangangoko kunokwenzeka. Oku kuya kuvumela umbono obanzi wexesha lakho elidlulileyo kwaye uthintele naluphi na ulwazi olunokonakalisa ukuba luvele kamva endleleni olunokubangela iingxaki ngamathuba exesha elizayo afana nokufumana indawo yokuhlala, umsebenzi, okanye ukuqala ubudlelwane obutsha.
Kwihlabathi lanamhlanje, i-intanethi iyinxalenye yemihla ngemihla yobomi babantu abaninzi. Nangona kunjalo, ngelixa ibonelela ngeenzuzo ezininzi kunye nezinto eziluncedo kubasebenzisi, kukwakho nemingcipheko ezayo ngokusebenzisa iinkonzo ze-intanethi.
Ezinye zezona zoyikiso zixhaphakileyo ziquka iintsholongwane, i-malware, kunye nobuqhophololo. Abaduni banokubeka ingozi kubasebenzisi ngokuqhekeza izixhobo zabo ngaphandle kwemvume okanye babe ulwazi lomntu siqu olufana namagama ayimfihlo kunye neenombolo zekhadi letyala. Nokuba yintoni na umxholo owufunayo kwi-intanethi, kubalulekile ukuba uqaphele le mingcipheko ukuba ungaphembeleli amava akho e-intanethi.